अमेरिकाले शिर्ष नेताहरुलाई सिधै सोध्योः एमसीसी के गर्ने ? « रिपोर्टर्स नेपाल
अमेरिकाले शिर्ष नेताहरुलाई सिधै सोध्योः एमसीसी के गर्ने ?
काठमाडौं, ३ मंसिर । अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बारे शिर्ष नेताहरुलाई भेटेर स्पष्ट जवाफ मागेको छ । नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले नेताहरुसँगको भेटमा एमसीसीबारे के गर्ने भनी प्रश्न गरेका हुन् ।
लूले आज नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा भएको भेटमा लूले एमसीसी संसदबाट पारित गर्नेबारे के हुन्छ भनी प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा ओलीले आफूहरुसँग सत्तारुढ दलले कुनै मतलब नगरेको जवाफ दिएका थिए ।
सत्तापक्षले आफूहरुलाई एमसीसीबारे केही नसोधेको समेत ओलीको जवाफ थियो । तर, अमेरिकी विदेशमन्त्री लूले एमालेको धारणाबारे पनि सोधेको बुझिएको छ । ओलीले एमालेको धारणा सत्तापक्षको औपचारिक धारणा आएपछि आउने जवाफ दिएको बुझिएको छ ।
आजै लूले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन् । उनले प्रचण्डसँगको भेटमा पनि एमसीसीबारे प्रश्न गरेको बुझिएको छ । प्रचण्डले एमसीसीबारे संशोधनको विषय उठेकोबारे कुरा राखेको बुझिएको छ ।
बिहिबार लूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटी एमसीसीलाई केन्द्रमा राखेर गम्भीर कुराकानी गरेका थिए । देउवाले एमसीसी पारित गर्न आफूले प्रयास गरेको विषय राखेका थिए । तर, सत्तापक्षभित्र समस्या रहेको विषय पनि प्रष्ट राखेको बुझिएको छ ।
कांग्रेसको समीकरण : को कति पानीमा ?
मंसिर १७, काठमाण्डौ । नेपाली काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा पुग्न निकै रस्साकस्सीे भइरहेको छ